के बादल पनि चोरी हुन सक्छ ? कसरी गराइन्छ कृत्रिम वर्षा ?
प्रकृतिमा नि:शुल्क पाइने हावाले पनि हामीलाई आर्थिक भार थोपर्न थालिसक्यो । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हामीले प्रयोग गर्ने हावाको पनि मूल्य तिर्नुपरेको कुरा त केही हप्ताअगाडि फैलिएको प्रदूषणका कारण स्कुल, कलेज, कार्यालयहरू बन्द गर्नुपरेको अवस्था, आँखा पोल्ने, छाला, श्वासप्रश्वास, मुटु आदि सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्याको आर्थिक नोक्सानीबाट अनुमान गर्न सकिन्छ ।
हामी अत्तालिएका थियौँ, उकुसमुकुस महसुस भएको थियो, पानी परिदियोस् भन्ने याचना गरेका थियौँ । केही दिनमा पानी पर्‍यो, तुवाँलो कम हुँदै गयो र राहत महसुस गरियो तर हप्तौँ वा महिनौँसम्म पनि पानी नपरेर अत्यासलाग्दो प्रदूषण कायमै रहन पनि सक्थ्यो ।
प्रदूषणका कारण हामी अत्तालिँदै गर्दा कृत्रिम वर्षाको पनि चर्चा चल्यो । विकसित मुलुकको हकमा त यो सम्भव पनि छ तर हाम्रोजस्तो प्रदूषण घटाउन गर्न सकिने सामान्य कामहरू त हुन नसक्ने देशमा कृत्रिम वर्षा त धेरै परको कुरा मानिन्छ । यस लेखमा कृत्रिम वर्षा के हो, कसरी गराइन्छ, यसका फाइदा बेफाइदा, के कस्तो छ भन्नेबारे केही छलफल गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
कृत्रिम वर्षा के हो ?
पृथ्वीको सतहमा रहेका पानीका स्रोतहरू हिमाल, ताल, तलैया, खोला, समुन्द्र आदिबाट वाष्पीकरण भएर जाने पानीको वाफ वायुमण्डलको तल्लो तह पृथ्वी सतहदेखि १७ दशमलव ७ किमिसम्म, ट्रोपोस्फेयरमा चिसिँदै जान्छ र बादलको रूपमा आकाशमा तैरिन्छ । पानीको वाफ चिसिँदै गएर तरलका थोपाहरू र कतिपय ठोस अवस्था बरफमा परिणत हुन्छन् । जब साना साना थोपाहरू मिसिँदै ठूला थोपा बन्छन्, तिनीहरू गह्रौँ भएर वर्षाको रूपमा पृथ्वीमा खस्छन्, बरफका टुक्रा कुनै असिना, कुनै हिउँको रूपमा खस्ने गर्छन् ।
धेरै माथिबाट खसेका असिना पृथ्वीको सतहसम्म आइपुग्दा कतिपय तुरुन्तै पग्लिने पनि हुन सक्छन् । वर्षा हुनुअगाडि बादलभित्र मौसमको निश्चित परिवेश अर्थात् उपयुक्त चाप, तापक्रम, हावाको बहाव, आँधी तयार हुन आवश्यक पर्छ । बादलभित्र केही बाह्य यौगिकहरू मिसाएर कृत्रिम रूपमा उपयुक्त परिवेश तयार गराएर वर्षा गराउने प्रक्रियालाई कृत्रिम वर्षा भनिन्छ ।
सिल्भर आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड, ठोस कार्बनडाइअक्साइड (ड्राइ आइस), लवणको धुलो आदि हवाईजहाजमार्फत बादलमा छर्किंदा चिसिँदै गरेको पानीको वाफका अणुहरूलाई यस्ता यौगिकहरूले एकत्रित गर्दै लैजान्छ र ठूला गह्रौँ थोप्लाहरू वा बरफका मणिभहरूमा परिणत भएपछि तिनीहरू वर्षाको रूपमा खस्न थाल्छन् ।
बादलमा कृत्रिम वर्षा गराउने उद्देश्यले यौगिक छर्किने प्रक्रियालाई 'क्लाउड सिडिङ' भनिन्छ । सन् १९४० देखि क्लाउड सिडिङको अभ्यास सुरु भएको थियो । खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा बादलको संरचना नै बदल्ने र पर्याप्त पानी पार्ने अवस्था सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो । सन् १९५० को दशकमा क्लाउड सिडिङको अभ्यास संसारका धेरै देशहरूले गरेका थिए ।
सन् १९६७ देखि १९७२ सम्म चलेको भियतनाम युद्धको बेला अमेरिकी सेनाले भियतनामका खासखास ठाउँमा मनसुन समय लम्ब्याएर भियतनामी सेनाको बाटो ( हो ची मिन्ह ट्रेल) हिलो बनाउने, पहिरो जाने गराएर अवरुद्ध गरी विभिन्न ठाउँमा आवतजावत र आपूर्ति बन्द गराउने उद्देश्यले 'अपरेसन पोपेय' भन्ने कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेको थियो । सैन्य उद्देश्यले मात्रै नभएर लामो समयको खडेरी कम गर्न, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न, वायु प्रदूषण कम गर्न, पानीका स्रोतहरू पुनर्भरण (recharge ) गर्न कृत्रिम वर्षा निकै उपयोगी हुने भन्दै पछिल्ला दशकहरूमा धेरै देशहरूमा क्लाउड सिडिङसम्बन्धी प्रोजेक्टहरू सञ्चालनमा आएका छन् ।
कृत्रिम वर्षाका फाइदा र बेफाइदाहरू
लामो समय खडेरी पर्दा उत्पन्न हुने संकटहरू त हामीले देखे भोगेकै छौँ । पानीका मुहानहरू सुक्ने, खेतीपाती नहुने, विभिन्न रोग कीराको प्रकोप फैलिने आदि समस्याबाट कृत्रिम वर्षामार्फत छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
पृथ्वीको कक्षमा कुनै पुच्छ्रे तारा वा छुद्र ग्रह नै आएर पृथ्वीमा ठोकिने अवस्था आउने भयो भने त्यसलाई हुत्याएर वा गति कम गराएर पृथ्वीलाई बचाउनेसम्मका समस्या हल गर्ने गरी वैज्ञानिकहरू लागिरहेका छन् । उनीहरूका लागि कुनै दिन पृथ्वीकै वायुमण्डल नियन्त्रण गर्न असम्भव नहोला कि ?
पर्याप्त वर्षा नहुँदा कृषि पैदावारबाट पनि नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुँदा कृत्रिम वर्षाको माध्यमबाट राम्रो उत्पादन लिन सम्भव हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो अर्थ राख्छ । आवश्यक परेको बेला वर्षा गराउन सक्दा पर्यावरणमा रहेका सम्पूर्ण वनस्पति तथा जीवजन्तुहरूलाई बाँच्न अनुकूल हुन्छ ।
कृत्रिम वर्षामार्फत भए पनि समयसमयमा पानी पर्दा मौसम सन्तुलित हुने, कतिपय सुक्खा क्षेत्रमा पनि खेती गर्न सकिने, पर्यटन व्यवसायलाई टेवा पुग्ने, वायु प्रदूषण कम हुने आदि कारणले गर्दा अर्थतन्त्रलाई नै मजबुत बनाउन सम्भव देखिन्छ । नियमित र आवश्यक पर्दा वर्षा गरायो भने जलवायु परिवर्तनको कारण उत्पन्न भएका र भविष्यमा हुन सक्ने प्रकोपहरूलाई पनि न्यूनीकरण गराउन सकिन्छ ।
अर्कोतिर प्राकृतिक प्रक्रियालाई नै हस्तक्षेप गरी विभिन्न रासायिनिक यौगिकहरू प्रयोग गरेर वर्षा गराउँदा त्यसले निम्त्याउन सक्ने थुप्रै खराब असरहरूबारे पनि बहस हुने गरेको छ । सिल्भर आओडाइडजस्ता रसायनको खराब असरबारे पर्याप्त जानकारी त अझै आएको छैन तर दीर्घकालीन असर पर्ने हुन सक्छ ।
यस्ता रसायनको असर माटोका सूक्ष्म जीव, वनस्पति, अन्य जीवजन्तुहरू र मानव स्वास्थ्यमा कस्तो हुन सक्छ भन्ने कुराको पर्याप्त अनुसन्धान नगरी प्रयोग गर्नु जोखिमपूर्ण पनि हुन सक्छ । यो कत्तिको प्रभावकारी छ भन्नेमा पनि फरकफरक तथ्यांक भेटिन्छ । अमेरिका चीनजस्ता मुलुकहरूले प्रयोगमा ल्याइसकेका क्लाउड सिडिङका कार्यक्रमको प्रभावकारितामा पनि प्रश्न उठने गरेका छन् ।
कतिपय ठाउँमा नियमित वर्षा हुने क्रममा १० प्रतिशत मात्रै वृद्धि गराउन सकिएको भन्ने खालका तथ्याङ्क देखिएका छन् । क्लाउड सिडिङकै कारण छनोटमा परेको क्षेत्रभन्दा बाहेकका ठाउँहरूको बादल पनि तानिने र ती ठाउँहरूमा अझै खडेरी पर्ने पनि हुन सक्छ । क्लाउड सिडिङमार्फत थुप्रै सुक्खाक्षेत्रमा खेती गर्ने कार्यक्रम चलाएको चीनलाई छिमेकको बादल चोरी गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । भोलिका दिनहरूमा धनी र विकसित देशहरूले आकाशको बादल पनि हडप्ने भए भने हाम्रोजस्तो देशको हालत के होला ?
सन् २००७ मा रसियन मिलिटरी पाइलटले कृत्रिम वर्षासँगै रेडियोधर्मी पदार्थ पनि खस्ने कुरा पत्ता लगाए । उनीहरूको रिपोर्टअनुसार सन् १९८६ को युक्रेनको आणविक दुर्घटनाका कारण निस्केका रेडियोधर्मी विकिरणलाई कारक मानिएको थियो । यो प्रविधि आर्थिक हिसाबले पनि महँगो मानिन्छ । सन् २०१० मा यूएईले ११ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको प्रोजेक्टमार्फत आँधी, चट्याङ, वर्षा सिर्जना गराएको थियो ।
आयोनाइजरको सहायताले चार्जहरू पैदा गराउने र वायुमण्डलीय आर्द्रता ३० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याएर कृत्रिम वर्षा गराएको थियो । त्यहाँ १२२ दिनको अन्तरालमा ५२ पटकसम्म कृत्रिम वर्षा गराइएको थियो । कृत्रिम वर्षाकै कारण मौसमको प्राकृतिक प्रक्रिया नै खलबलिएर भोलि झन् जटिलता थपिने पो हो कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ । रासायनिक पदार्थमार्फत गरिने वर्षाले पृथ्वीको जैविक विविधतामा नै संकट पनि ल्याउन सक्नेतिर पनि वैज्ञानिकहरूले चिन्ता देखाएका छन् ।
कतिपय मानिसहरूले विज्ञानले प्रकृतिलाई जित्न सक्दैन भन्ने तर्क पनि गरेको सुनिन्छ । हुन त विज्ञानको खोज प्रकृतिलाई जित्नका लागि होइन, मानव सभ्यताको विकासक्रममा आवश्यकता महसुस गरिएका कुराहरूको खोजी गर्दै जाँदा मानिसले प्रकृतिलाई आफ्नोअनुकूल प्रयोग गर्न हरदम प्रयास गर्दै आएको मात्र हो । कृत्रिम वर्षा गराउने प्रविधि पनि अनुकूलताको खोजी नै हो तर कुनै उपलब्धिसँगै त्यसका नकारात्मक असरहरू पनि सँगै आउने भएकाले भोलिका दिनमा कृत्रिम वर्षाले निम्त्याउने समस्याबारे पनि पर्याप्त अनुसन्धान भइरहेका छन् ।
कुनै दिन बादलको पनि इञ्जिनियरिङ गरी असिना पर्नबाट रोक्ने, अधिक वर्षा हुनबाट रोक्ने, आँधी, हुरी, चट्याङजस्ता समस्या नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रविधिको विकास भयो भने मानव समुदायलाई ठूलो राहत पनि हुन सक्छ । चर्को खडेरी, बाढीपहिरोका जोखिम, विभिन्न रोगका महामारीजस्ता धेरै समस्या जलवायुमा आएको असामान्य परिवर्तनले हो भन्ने देखिएको छ । हालसालैका वर्षहरूमा स्याटलाइट, ड्रोनहरूमार्फत पनि मौसमको सटिक अनुमान गर्ने र अनुकूलता स्थापित गर्ने प्रयासलाई विशेष चासोको रूपमा लिन थालिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १५, २०७८, ११:०४:१०